Mpanoratra Roa Nametra-Pialana Ampahibemaso Ao Anatin’ny Finiavan’ny Antoko Komonista Shinoa Hangeja Ny Kolontsaina · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 31 Marsa 2016 17:42 GMT
Navoakan'i Jing Ge tao amin'ny eibo tamin'ny 12 marsa ny pikantsarin'ny taratasy fametraham-pialany nasiany fanamarihana:
Nivoaka tao amin'ny media sosialy ny fanambaran'i Ye Mi ny ampitso, 13 Marsa. Nisy naoty nipaingotra taminy:
Teo anivon'ny ady ara-pirehan-kevitra ataon'ny manampahefana ao amin'ny antoko, araka izay hita taratra ao amin'ny kabariny nandritra ny fihaonamben'i Beijing eo amin'ny literatiora sy ny zavakanto tamin'ny 2014 ny Media, ny literatiora azy ny zavakanto. Nandritra ny fihaonambe no nideran'i Xi an'i Zhou Xiaoping sy i Hua Qianfang, mpaneho hevitra an'aterineto anankiroa mampiady hevitra izay nanomboka ny fanentanana hanoherana ireo mpitari-kevitra fanta-bahoaka, noho ny fandraisana anjaran'izy ireo amin'ny “fampielezana angovo miabo”.
Ny zavamisy dia nanome akony ny kabarin'i Mao Zedong, izay manara-maso ny fananganana ny Repoblika Entim-Bahoakan'i Shina ny kabarin'i Xi ary ireo nitondra dia fantatra tamin'ny tolona ara-pirehankevitra mahery vaika, tamin'ny Fihaonamben'i Ya'nan momba ny literatiora sy ny zavakanto tamin'ny 1942. Izany toejavatra izany no nanamarika ny fanombohan'ny Fanentanam-Panitsiana, fanentanana ara-politika hanamafisana ny fitarihan'i Mao ao amin'ny antoko. Miverina ve ny tantara? Ny fotoana no hilaza izany.